Caterpillars na paini: esi edozi pests - Ornamental osisi na-eto eto - 2019
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na achọtara caterpillars na osisi fir: ụzọ ndị na-esi agwọ ọrịa conifers
Enwere caterpillars ndị na-eri ọ bụghị naanị akwụkwọ, ha na-etinye ihe dị na paịl. Ndị na-eto eto na-eto eto na-atọ ụtọ na ha na-eji osisi ndị na-eme mkpọtụ eme ihe. Osisi osisi na-etinye ihe ize ndụ n'oge - mgbe ụfọdụ, ọ na-enweta granules nke agba aja aja. Mgbakwunye dị otú ahụ ga-eme ngwa ngwa ka ọkpụkpụ na-agbọ ụra nke na-ebibi alaka osisi ahụ.
Ka anyị mụta ụzọ ị ga-esi chekwaa mkpa dị iche iche site na anya nro.
Kedu ụdị mmebi ihe nwere ike ịme ihe nkedo fir na-eme ka ọ bụrụ ihe ọkụkụ?
Caterpillars na paini: otu esi emeso pesti
Ntucha na ndi mmadu ogwu
Chemicals megide caterpillars na paini
Mgbochi caterpillar na fir
Katapila na paini: nkọwa na ndụ ndụ nke pesti
Ọbụna obere pests nke fir nwere ike imebi osisi kachasị ukwuu. Mgbe ị na-ebu ụzọ tinye ụyọkọ na capsules na-acha aja aja, tụọ mkpu! N'oge na-adịghị anya ndị caterpillars nọ na-ebi na osisi fir. Capsules na-edozi ha.
Ị ma? Oria ahụ nwetara aha ya n'ihi ụfọdụ ihe ndị dị na ntanye akwa - otu akụkụ pụrụ iche (ovipositor) na-etinye ha n'okpuru oyi akwa epidermal nke ogwe osisi ma ọ bụ osisi, "na-egbuchasị" anụ ahụ nke osisi ahụ. Ndị tozuru okè na-ejikarị azụ, n'ihi ya ha na-enwe mgbagwoju anya na ụmụ ahụhụ ndị a.
Tupu ịmalite ọgwụgwọ, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iji chọpụta ụdị nsị dị iche iche na paini. Red Sawfly - na larvae bụ unyi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nwa, na a ewepụghị isi. Ha bi n'ìgwè. N'ịche nchekasị dị ntakịrị, ha na-emeghachi site n'ịkwalite n'ihu ahụ. Ndị a bụ ikiri mmiri ndị dị ize ndụ, ndị na-eto eto toro eto. Silkworm paini n'ụzọ nkịtị n'oge na-adịghị anya na-eduga ná ọnwụ nke osisi ndị na-eme mkpọtụ. A na-emeri osisi ndị dị oké ọnụ n'oge okpomọkụ cone. Ndị caterpillars ndị a na-akwatu cones na paịl, na-ahapụ nsị na nkedo. Na pesti bụ ihe kacha dị ize ndụ n'ihi na osisi.
Akwukwo anu - butterflies na-etinye ha na àkwá na ochie paini awara na edozi edozi. Ná ngwụsị nke ọnwa mbụ nke oge okpomọkụ, caterpillars na-apụta site na àkwá, nke na-abanye ngwa ngwa abịga na buds. Mbipụta dị ukwuu nke nla nwere ike iduga n'ịchacha osisi kpamkpam.
Na akụkụ Europe nke mba anyị, awara awara nwere ike ịkwata ọtụtụ ụdị caterpillars n'otu oge. Achịcha nkịtị na-acha uhie uhie na-achakarị agba. Mgbe ụfọdụ, a na-achọta windflies na ebe ọwụwa anyanwụ na-acha odo odo. Ha dị ka ibe ha na ogo nke emebi conifers. Ha dị iche na ọnụ ọgụgụ ọgbọ.
N'etiti Central Russia, ndị na-emepụta kịtịkpa ndị dị na ya na-atụsi ike na-atụba nsen ugboro abụọ n'oge okpomọkụ na mkpụrụ - nke a na-akpata oké njọ osisi.
Ụmụ obere na-eto eto nke pine pinefly na-eri nri dị mkpa site na akụkụ, ya mere, a ghaghị iji usoro nchịkwa mee ngwa ngwa. Akụkụ ndị ahụ na-adịghị ahụkebe nke abị ahụ malitere ịkụ, tụgharịa edo edo na curl. Ndị toro eto tozuru etozu na-etinye ọkpụkpụ ahụ kpamkpam.
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke larvae na enweghi ihe oriri nwere ike ime ka ogbugbo, nke ga-eduga na nchịkọta nke osisi coniferous na okpueze.
Ndị na-eto eto, ndị na-eto eto, na-arụ ọrụ site na mkpịsị ụkwụ, nwere ike ịmalite afọ atọ ruo ise. Pest caterpillar paini na-ebelata osisi ahụ. Njirimara ndị a ma ama nke paịl emetụtara na ebe niile na saịtị ahụ na-ebelata. Nchọpụtaghachi ugboro ugboro site na mpi n'otu oge pụrụ iduga ọnwụ nke nguzo n'oge oyiing.
Ọ dị mkpa! Ndị agha ahụ na-achịkwa pines n'okpuru afọ iri atọ.
N'etiti ihe ndị e ji achọ mma, ndị Pines nke Weymutov na Banks bụ ndị kacha emetụta. Nri na-eto n'elu elu nke ebe nchekwa na ala akọrọ, ájá na ájá ájá, ma ọ bụ osisi ndị owu na-anọkarị na-aba ụba site na ikuku.
Sawfly pine na-emebi odo na buds, n'ihi ya, ị ga-ahọrọ ụzọ kwesịrị ekwesị nke ịchịkwa.
Ị ma? Ogologo oge dị mkpụmkpụ nke ịnọ na-ahụ maka anụ ọhịa ahụ na caterpillar na-eme ka mmebi nke paini ahụ mebie ruo mgbe ogwe ahụ gwụsịrị.
Ị nwere ike ịlụ ọgụ na saar caterpillars site n'ibu usoro. A ghaghị iwepụ mkpụrụ osisi buds na Ome na pines na caterpillars ojii site na osisi wee gbaa ya ọkụ. Iji merie caterpillars na-acha uhie uhie na oji, otu onye kwesiri icho ala ala gburugburu ogwe ahu, mebie uzo na ogwu ha.
Ghọta larvae n'aka na uwe na iko na obere osisi pine. Larvae na-arụsi ọrụ ike n'ihe ize ndụ. Iji kpuchie ọbara nke "burp" nke nwere ihe na-ekesa ọrịa.
Ndị ọkachamara maara otú e si esi na-agba fir site na caterpillars. A na-emeri ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ (black) caterpillars site na iji ọgwụ ahụhụ insecticidal "Aktellik" na "Confidor".
Ị nwere ike ịkwanye osisi na njikere nke sitere n'okike:
N'etiti mmepụta ihe maka ịzụ ụmụ obere nwa nke caterpillars, otu ọgwụ a na-akpọ "Arrivo" kwuru nke ọma banyere onwe ya.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ị kpebiela otú ị ga-esi lụso agha mgbochi ọgụ n'ụzọ dị egwu, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịnwale ọgwụ na otu osisi fir tupu ịmalite usoro ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na n'ime awa 24 ọnọdụ nke osisi conifer adịghị njọ, ị nwere ike itinye ngwá ọrụ ahụ n'ọrụ n 'osisi niile a kụrụ na saịtị gị.
Maka arụmọrụ, ndị ọkachamara na-atụ aro ọgwụ ndị ọzọ. Na-agụ ntụziaka mgbe niile tupu i jiri ya. Debe iwu nchebe n'oge nhazi nke pines site na pests.
Mgbochi na ọnụ ọgụgụ dị ala bụ iji soro ọnọdụ ihu igwe. Azu mmiri na-amị n'oge okpomọkụ na akọrọ (njedebe oge opupu ihe ubi - mmalite oge okpomọkụ). Ọ bụrụ na a na-atụ anya okpomọkụ na-ekpo ọkụ, dị njikere. Oge mmiri ozuzo dị ize ndụ maka caterpillars - ha na-anwụkarị site na ọrịa.
Ya mere, umu nkita ihe di n'ime ala gburugburu osisi paini, n'ihi ngbochi, o bu ihe choro ka igwu olulu di nso na November. Na oge opupu ihe ubi, ọ dị mkpa ịbibi larvae site na ịpịnye ndị na-ahụ maka ahụhụ na ndị na-ahụ maka nje na pine sawfly.
Na-eche echiche site na mpaghara ihe odide obodo, kụrụ mkpuru osisi Crimea nso osisi deciduous, prickly bushes. Ọ naghị emebi emebi site na ikiri. Nchighari nke osisi pine na osisi osisi na-eme ka o siere ndi nwanyi ike icho nri. Gwuo ala gburugburu paini na njedebe oge okpomọkụ - na mmalite nke mgbụsị akwụkwọ ruo omimi nke 7-10 cm Otú ọ dị, egbula ya, ka ọ ghara imebi mgbọrọgwụ nke ubi.
Na-adọta ụmụ nnụnụ na saịtị gị nke na-eri nri na pests nke coniferous osisi site na caterpillars. Iji mee nke a, debe na kporo osisi igbe osisi, mepụta igbe ndị akwụ. Chalcides, ichneumonids, tachins, ugbo uhie uhie, enweghi ala na-enweghi oke ogwu. Ghaakwuo okooko osisi n'ime ogige - ndi na-agbachitere umu ahihia ndi mmadu ga-abia na ndi ozo n'ile gi.
Kasị mma melons maka tebụl gị
Ngwunye ojii cumin: ihe ọ na-enyere na ihe ọrịa ọ na-emeso, otu esi eji
Mkpụrụ osisi chara acha nke dịgasị iche iche Laguna - ezigbo ihe ọkụkụ maka akuku na mpaghara na obere oge
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na achọtara caterpillars na osisi fir: ụzọ ndị na-esi agwọ ọrịa conifers